पहाड पल्टाउने डम्बरसिंहः अर्थात नेपाली ‘माउन्टेन म्यान' पहाड पल्टाउने डम्बरसिंहः अर्थात नेपाली ‘माउन्टेन म्यान'
पहाड पल्टाउने डम्बरसिंहः अर्थात नेपाली ‘माउन्टेन म्यान'
१५ फागुन । जब तपाई इलामको माइपोखरीबाट उत्तर-पश्चिमतर्फ मोडिनुहुनेछ, तपाईको आँखामा भारतीय फिल्म ‘माझीः द माउन्टेन म्यान’ को सजीव दृश्य नाच्न थाल्छ । अथवा तपाईलाई याद आउँछ, चिनियाँ लोक उखानमा चर्चित ‘पहाड पल्टाउने मूर्ख बूढो’ को । भारतको विकट गाउँका ‘दशरथ माझी’ले २५ फुट अग्लो पहाड काटेर मोटरबाटो बनाए, पत्नी वियोगको पीडा भुल्न । चट्टाने पहरामा काम गरिरहेको माझीलाई खाना पुर्‍याउन गएकी गर्भवती पत्नी जब ढुंगामा चिप्लिएर ज्यान गुमाइन्, तब दशरथ माझी पहाड छेड्न तम्सिए । उनले निरन्तर २५ वर्ष त्यही ढुंगे पहरामा छिनो र हतौडा चलाइरहे ।
शोकलाई शक्तिमा बदल्दै ९० वर्षीय हजुरबा
भारतको विकट गाउँका ‘दशरथ माझी’ले २५ फुट अग्लो पहाड काटेर मोटरबाटो बनाए, पत्नी वियोगको पीडा भुल्न । चट्टाने पहरामा काम गरिरहेको माझीलाई खाना पुर्‍याउन गएकी गर्भवती पत्नी जब ढुंगामा चिप्लिएर ज्यान गुमाइन्, तब दशरथ माझी पहाड छेड्न तम्सिए । उनले निरन्तर २५ वर्ष त्यही ढुंगे पहरामा छिनो र हतौडा चलाइरहे । अन्ततः ३६० फुट लामो मोटरबाटो तयार भयो । यो मोटरबाटो नै माझीको विकट गाउँलाई शहरसँग जोड्ने सेतु बन्यो । दशरथ माझीको यही जीवनगाथालाई फिल्मांकन गरिएको छ, माझी द माउन्टेन म्यानमा । नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभिनित यो सिनेमा हेरेपछि इलामका डम्बरसिंह सुनुवारको सम्झना ताजा बनेर आउँछ ।
एक वृद्धले निरन्तर पहाड खोस्रिइरहन्छन् । अचम्म मानेर मान्छेले सोध्छन्, यसरी साबेलले एक्लै किन पहाड खोस्रेको ? वृद्धले जवाफ दिन्छन्- यो डाँडाले मेरो घरको घाम छेकेको हुनाले खनेको हुँ । प्रश्न उठ्छ- यसरी खनेर पहाड सम्याउन सकिन्छ त ? जवाफ आउँछ- म यसैगरी खनिरहन्छु, मेरा छोराहरुले खन्छन् । सन्तानहरुले खन्छन् । त्यसपछि एक दिन भगवानले सर्लक्कै यो पहाड उठाएर हटाइदिन्छन् । एक्लै पहाड पल्टाइरहेका डम्बरसिंहलाई देख्दा यस्तो लाग्छ- चिनियाँ नेता माओले उधृत गरेका ‘पहाड पल्टाउने मूर्ख बूढो’ यिनै हुन् ।
नेपाली ‘माउन्टेन म्यान'
Lumbini Media - Nepali News and Entertainment Portal, Daily Nepali News Updates From Lumbini, Nepal: पहाड पल्टाउने डम्बरसिंहः अर्थात नेपाली ‘माउन्टेन म्यान'